बैंकले प्रज्ञापनपत्र नक्कली र सक्कली हो भन्ने जाँचेर बस्दैन | Business and Economy of Nepal
बैंकले प्रज्ञापनपत्र नक्कली र सक्कली हो भन्ने जाँचेर बस्दैन
Posted on September 30, 2011 by Babukrishna
नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०४४ चैत्रमा सेवा प्रवेश गरेर करिब २१ वर्ष काम गरी निवृत्त भएका सुरेन्द्र प्रधान हाल सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँले एमबीए र न्यु दिल्ली इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टअफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गर्नुभएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर पनि कार्य गरिसक्नु भएका उहाँले राष्ट्र बैंककै सेवाको दौरान राष्ट्रिय विमान संस्थाको प्रशासक र सञ्चालक समिति सदस्य रहेर पनि कार्य गर्नुभयो । उहाँले नेपाल धितोपत्र बोर्डको राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य र निवृत्त भएपछि पनि विज्ञ सदस्यको रुपमा रहेर समेत सेवा गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधिको दौरान उहाँले वित्त व्यवस्था विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, आन्तरिक लेखा विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम विभागमा रहेर काम गर्नुभयो । सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानसँग नेपाल समाचारपत्रका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
बैकिङ कसुर ऐन अनुसार सजायको भागी रहेर फरार रहेका व्यक्तिहरुले नियमानुसार कर्जाको किस्ता बुझाए पनि तिनीहरुको रकमलाई थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ? यसबाट बैंकको नाफामा कस्तो असर पर्ला ?
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट निर्देशन जारी गरेर फरार रहेका व्यक्तिहरुको हकमा विशेष रुपमा थप नोक्सानी व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर निर्देशन आइसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । सनराइज बैंकमा पनि सुपरिवेक्षण गरेर गएको भए पनि खासै विशिष्ट निर्देशन दिएको अवस्था पनि छैन । नेपाल शेयर मार्केटको सवालमा मेरो बैंकको अन्तर बैंक ऋणको कुरा मात्र हो । राकेश अडुुकियाको सवालमा गत असार मसान्तसम्मको व्याज चुक्ता भइसकेको स्थिति हो । ऋण लिने पक्ष सम्पर्कमै थियो । अरु बैंकमा के निर्देशन आएको थियो त्यो कुरा थाहा भएन । अडुकियाको सवालमा व्यक्तिगत कर्जा पनि गएको हुनसक्छ, र उहाँ संलग्न कम्पनीलाई पनि कर्जा गएको हुनसक्छ । व्यक्ति फरार भएको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर भन्नु राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ठिकै हो । ऋण असुल भए पनि नभए पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भविष्यमा सुरक्ष्ँित नै भइन्छ । ऊ संलग्न भएको कम्पनीको सवालमा कम्पनीले समय समयमा तिर्नुपर्ने व्याज भुक्तानी गरिरहेको छ भने त्यस अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसबाट बैंकको नाफामा अलिकति असर त अवस्य पर्ने नै हुन्छ ।
भारु अपचलनमा बैंकहरु संलग्न रहेको पाइयो ? यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नक्कली प्रज्ञापन पत्र जारी गरेर भारतीय रुपियाँ अपचलन ग¥यो भन्ने कुरालाई जोडेर केही बैंकहरुको नाम मुछिएको छ । बैंकको काम भनेको आएको कागजातको आधारमा फाइनान्सिङ गर्दै जाने हो । प्रज्ञापन पत्र नक्कली वा सक्कली हो भन्ने कुरा बैंकले जाँच गरेर बस्दैन । यदि त्यही अवस्था थियो भने ८० करोडदेखि १ अर्बसम्म भारतीय रुपियाँ भन्सारको प्रज्ञापन पत्रको आधारमा बाहिर गएको कुरा अहिले मात्र कसरी पहिचान गरियो । यो शुरुवातमै किन पहिचान गरिएन सोचनीय कुरा यहाँ छ । प्रज्ञापन पत्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ, भन्सारमा बुझाउनुपर्र्छ । यो नक्कली हो भनेर बैंकले त किटानीसाथ भन्न सक्दैन । हुन त एक समिति गठन गरिएको छ त्यसले केही प्रतिवेदन चाँडै नै प्रकाशित गर्ला । मेरो विचारमा अहिले नै तुरुन्तै टिप्पणी गरिहाल्नु ठिक हुँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने लहर नै चलेको छ, मर्जरलाई सनराइजले कसरी हेरेको छ ?
सनराइज बैंकले मर्जरको सवालमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन । भर्खरै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार २ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याइसकेको अवस्था हो । नेपालले विश्व व्यापार संघको सदस्यता लिइसकेको र उदार अर्थव्यवस्था अपनाइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले जाने हो भने बैंकको आकार ठूलो बनाएर जानुपर्छ यसमा कोही दुई मत हुन सक्दैन । सनराइज बैंकको सवालमा विशेष रुपमा सोच्ने हो भने बैंकको व्यवसायको आकार त्यति ठूलो भइसकेको अवस्था छैन कि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धामा जान आफ्नो पुँजी बढाइहाल्नु परोस् । अहिलेको क्षमता भित्र रहेर कुरा गर्दा सनराइजले तुरुन्तै मर्जरको विषयमा सोचिहाल्नु पर्ने तत्काल आवश्यकता छ जस्तो चाँहि लाग्दैन । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था एवम् नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई हेर्ने हो भने चाँहि मर्जरमा जानु राम्रो उपायको रुपमा लिन सकिन्छ ।
बैंकहरुले विस्तारै तरलता वृद्धि भएको भन्दै निक्षेपमा व्याज घटाउन थालेका छन् । यसले समग्र बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर देख्नुभएको छ ?
निक्ष्ँेप आउने नआउनेमा मुख्य सवाल भनेको जनमानवको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी हो । नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स लिमिटेडलाई खारेजीमा पठाइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको पैसाको जिम्मेवारी लिँदैन भन्ने कुरो बजारमा गयो । यसबाट निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर गएको अवस्था थियो । तर अहिले आएर वित्तीय क्षेत्रमा जनमानसको विश्वास अलिक बढेको अनुभूति भएको छ । यसको परिणाम स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । साथै बजेट समयमै आएको कारण पनि निक्षेपमा वृद्धि भएको हुनसक्छ । निक्षेपमा सुधार आएपछि केही ठूला बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज दरमा कटौती गर्न थालेका छन् । संविधान नबनिसकेको अवस्थामा तुरुन्त के हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन रहेको हुँदा निक्षेपमा व्याज घटाएर जाने नजाने विषयमा सनराइज ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको छ । अहिले सबै बैंकले व्याज घटाइसकेको अवस्था पक्कै छैन । यस्तै सकारात्मक घटनाहरु भइरहने हो भने निक्षेपको व्याज दर घट्ने निश्चित छ ।
बैंकको इफिसेन्सी बढाएर कर्जाको व्याज घटाउन सकिदैन ?
कस्ट अफ फन्ड बढ्दो कर्जाको व्याजमा वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो । कस्ट अफ फन्ड बढ्ने भनेको मुख्यतया निक्ष्ँेपमा व्याज वृद्धि हुनु र अन्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि हुनु हो । बैंकहरुको निक्ष्ँेपको प्रकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत निक्ष्ँेप र मुद्दती निक्षेप धेरै भएको अवस्थामा कस्ट अफ फन्ड बढिहाल्छ । वचत निक्षेप जुन बैंकमा बढी छ, त्यस बैंकमा कस्ट अफ फन्ड कम हुन्छ । वचत निक्ष्ँेपमा प्राय बैंकले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेको छ । यसले कस्ट अफ फन्ड घटाउन योगदान दिइहाल्छ । संस्थागत निक्ष्ँेप र मुद्दती निक्षेप बढी भएका बैंकको कस्ट अफ फन्ड बढ्ने गर्छ । कस्ट अफ फन्ड बढ्दा पनि केही सञ्चालन खर्चमा मितव्ययीता अपनाएर कर्जामा व्याज केही हदसम्म घटाउन त सकिन्छ । यसबाट शत प्रतिशत कर्जाको व्याजदर घट्ने नभएर सकेसम्म तल्लो तहमा भने पु¥याउन सकिन्छ ।
प्रतिकुल अवस्थमा पनि सनराइज बैंकको नाफा बढ्नुको कारण के हो ?
सनराइज बैंकले सञ्चालन मुनाफा गत वर्षको तुलनामा बढाएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको अधिनमा रहेर नोक्सानी व्यवस्था अत्यधिक राखेर पनि गत वर्षको भन्दा खुद मुनाफा बढी गरेका छौं । हामीले गत वर्ष सञ्चालन दक्ष्ँतालाई बढाएर लग्यौ, व्यावसायको आयतनलाई पनि बढाउँदै लगेर ट्रेजरी व्यवस्थापनलाई थप व्यवसायिक बनायौं । हाम्रो पुँजी आधार पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेर गयो, यसले पनि व्यवसाय बढाउनमा सहयोग ग¥यो । म आइसकेपछि विशेषगरी लागत घटाउने प्रणालीमा विशेष जोड दियौं । गत वर्ष ४७ शाखा पु¥याउने योजना रहे पनि हामीले नयाँ शाखा विस्तार गर्नमा नलागि पुरानो शाखालाई चाहिने रकम मात्रै खर्च गरेर पनि नाफा बढाउन योगदान गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ? यो व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी देखिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कुल कर्जाको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले विपन्न वर्गमा कर्जा जाओस् भन्ने मनसायले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेर गरिबीको स्तरलाई अलिकति सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर विपन्न वर्गभित्र बसेर काम गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने सोचेर आएको भए जाति हुन्थ्यो । बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा तुरुन्त वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्था आएर अहिले राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतलाई पनि आधा पारेर शुन्य दशमलब २५ प्रतिशत पौैषसम्म र बाँकी २५ प्रतिशत असार मसान्तसम्ममा बढाउनुपर्ने नयाँ निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । नीतिको कार्यान्वयन कति हदसम्म सफल हुन्छ भन्ने पहिल्यै मूल्यांकन गरेर नीति आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रतिशत बढाउनु भन्दा पनि पहिले गएको ३ प्रतिशत नै राम्रोसँग प्रयोग भएको छ कि छैन बुझ्नु जरुरी छ ।
« पौने तीन अर्ब अपचलन गर्ने बैंकर पक्राउ शोधनान्तर वचत ८ अर्ब ३० करोड »